Banyere Anyị - Tanrimine Metal Support Co., Ltd.
Anyị bụ nnukwu onye nrụpụta
na onye na -eweta ngwaahịa setịpụrụ na China
Tanrimine Metal Support Co., Ltd (TRM) bụ onye nrụpụta ọkachamara maka SPLIT SET PRODUCTS (mgbachi mgbachi na efere) nwere ngwa ya na ihe ndị mejupụtara ya.
Dị ka nnukwu onye nrụpụta na onye na-eweta ngwaahịa ekewara ekewa na China, anyị nwere ikike karịrị tọn 10,000 maka ụdị bolt na efere dị iche iche, ka ọ dị ugbu a na ndị mpịakọta mpịakọta dị elu na PLC-Welders anyị nwere ike nye ngwaahịa dị elu iji zute. ihe ndị chọrọ n'ọkwa dị elu n'ọhịa a sitere na mba dị iche iche n'ụwa.
Usoro njikwa mma anyị na -agba mbọ na -aga n'ihu na -emeziwanye mma site na inye ndị ọrụ niile ikike iburu ibu ọrụ maka ogo ọrụ nke ha site na ọzụzụ n'ime na nke mpụga, onye ọrụ ọ bụla nwere ọrụ maka ịdị mma ngwaahịa/ọrụ, dị mkpa maka ọrụ a na -arụ. Mmejuputa na ogbugbu nke Sistemụ Njikwa Ogo (QMS) na usoro bụ ọrụ dịịrị ndị isi ụlọ ọrụ.
Onye nnọchi anya njikwa (Onye njikwa ogo) bụ ọrụ maka ileba anya n'ihe omume QMS kwa ụbọchị dị ka akọwara na Akwụkwọ ntuziaka (soro ihe akọwapụtara akọwapụtara nke GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008) na nnabata usoro na usoro metụtara. arụmọrụ arụmọrụ ngwaahịa/ọrụ tụọ site na nyocha nke ime na ụzọ njikwa dị ugbu a.
Ebumnuche nke okike
Teknụzụ na ahụmịhe anyị na -enyere anyị aka imepụta ngwa ọrụ ọnụ ala ngwa ngwa, nke na -ebute usoro mmepụta obere oge. Otú ọ dị, anyị ka nwere ike na -ejigide nnagide na -enweghị atụ, na -eji teknụzụ nrụpụta kacha ọhụrụ arụpụta ngwaahịa ruru eru.
Ejikọtara ya na injinịa anyị ka esi amata, anyị na-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ha, na-ewere echiche ha na mkpa injinịa ka ọ bụrụ eziokwu, na-enye ụzọ ka mma, nke okike karịa, na-ebelata ọnụ ahịa, na-ebelata inyefe oge ma na-emeziwanye ngwaahịa ndị emechara nke ọma.
Site na ika anyị, anyị na -echekarị maka ịdị mma nke ngwaahịa anyị ma na -eme ka ogo dị ka ihe mgbaru ọsọ anyị nke mbụ site na mmepụta. Anyị na -elekwasị anya na ndị ahịa anyị na -achọ ihe achọrọ site na kọntaktị mbụ ruo mbupu ikpeazụ, nke butere usoro nke ọ bụla site na mmalite ruo n'isi na nlekota nke ọma site na sistemụ njikwa mma ụzọ abụọ anyị.
Anyị raara onwe anyị nye mbenata mmụba na -aga n'ihu na mkpofu na ngbanwe ngwa ngwa iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa kacha mma nke kacha mma, anapụta n'oge n'oge ọnụ ahịa kacha mma.
Nchebe bụ mgbe niile ozi kacha elu maka ngwaahịa na usoro anyị, ọ bụkwa isi ihe iji ruo ebumnobi anyị. Nkwenye anyị maka ịdị mma bụ ihe kachasị mkpa na sistemụ njikwa mma anyị nke na -agba mbọ hụ na rụpụta na ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa na -enweghị ntụpọ na ọkwa enweghị ọrụ.
Site n'ịgafe ihe ị tụrụ anya ya wee na -emeziwanye ihe niile anyị na -eme, anyị bịara ebe a iji nweta ihe ịga nke ọma anyị site n'inyere gị aka ime nke gị.